News – Page 191 – မြန်မာသတင်းစုံ
ညမှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်လို့ေ ဆးရုံကို အချိန်မီရောက်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ညလုံး ဒီတိုင်းပစ်ထားခံရပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ သနားစရာလူငယ်လေး
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကလေး) မှ ပဉ္စမနှစ် စက်မှု စွမ်းအင်ဌာန(Mechanical Power) ကျောင်းသားတာန် ဒါလ်းမွန်းမာန် (Tg Dal Mun Mang) ရုတ်တရက် တိမ်းပါးခဲ့ရမှုသည် ဆိုင်ကယ် လဲမှုကြောင့် ဆိုသည့် မှုခင်း ရဲမှတ်ချက်ပါဆေး မှတ်တမ်း ကိုကြည့်ပြီး ကြားသိရသူတိုင်း နှမျောသတ ဝမ်းနည်းကြေကွဲ လို့မဆုံးဖြစ်ရသလို အမှုဖြစ်စဉ်ကို ပြန် လိုက်ရသည့်အခါ ကြားသိရသည့် အချက်အလက်များသည် ကလေးခရိုင် အ​ထွေထွေဆေးရုံကြီး ရှိ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပေါ် ကို Read more
ICJအပြီး ဘင်္ဂလားချေဒ်ကတော့ မြန်မာကိုယုတ်မာပြီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး (အိုင်စီဂျေ) ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မှားယွင်းစွာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံအမတ်ကြီးကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးဟန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury ကို ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့တာလို့ အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက မကြာသေးခင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ Read more
မွေးဖွဈသူ ဒုက်ခိတသညျကို ဗနျဒါသီးကောကျ ထုပွီးရောငျးကြှေးနတေဲ့ အသကျ (၈၅) နှဈ အရှယျ အဖှားအိုကို ကူညီပေးကွပါ
ရနျကုနျတိုငျး၊ ဒဂုံ အရှေ့ (၈) ရပျကှကျ၊ သစ်စာလမျး၊ အိမျအမှတျ (၈၅၁) မှာ နထေိုငျတဲ့ အဖှား နာမညျ ဒျေါခငျညို (၈၅) နှဈလို့ သိရပါတယျ။ ဒီအသကျအရှယျအထိ လမျးတကာလှညျ့လညျကာ ဗနျဒါသီးကောကျ အိမျရောကျတော့ ဗနျဒါသီးကို ထုကာ ဗနျဒါစလေ့ေးမြားကို ရောငျးခပြွီး မွေးဖွဈသူ ဒုက်ခိတသညျကို လုပျကြှေးနရေတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဖှားတို့ နရေတဲ့ အိမျကလညျး ပုံတှအေားလုံးမှာ မွငျတဲ့အတိုငျးပါပဲ မိုးကမလုံ့တလုံ၊ အကာအရံက ဖွဈသလို တှရေ့ာနဲ့ ကာရံနထေိုငျရပွီး၊ အနဆေငျးရဲ၊ အစားဆငျးရဲ၊ Read more
ထိုငျးနိူငျငံတှငျ မွနျမာနိူငျငံသားတဈယောကျ အခနျးခပေး စရာမရှိလို့ atm ပုံးကို သံတူရှငျးနဲ့ ရိုကျခှဲပီး ငှယေူမှုဖွဈပှား
20.1.20.ယနလေ့ညျ ထိုငျးနိူငျငံ မွနျမာနိူငျငံသားတဈယောကျ အခနျးငှါးနတော အခနျးခပေး စရာမရှိလို့ atm ပုံးကို သံတူရှငျးနဲ့ ရိုကျခှဲပီး ငှတှေယေူတာ ထိုငျးရဲတှေ ဖမျးဆီးခွငျးခံလိုကျရပွီး. 20.1.20.ယနလေ့ညျ ထိုငျးနိူငျငံ မွနျမာနိူငျငံသားတဈယောကျ အခနျးငှါးနတော အခနျးခပေး စရာမရှိလို့ atm ပုံးကို သံတူရှငျးနဲ့ ရိုကျခှဲပီး ငှတှေယေူတာ ထိုငျးရဲတှေ ဖမျးဆီးခွငျးခံလိုကျရပွီး. UNICODE 20.1.20.ယနလေ့ညျ ထိုငျးနိူငျငံ မွနျမာနိူငျငံသားတဈယောကျ အခနျးငှါးနတော အခနျးခပေး စရာမရှိလို့ atm ပုံးကို သံတူရှငျးနဲ့ ရိုကျခှဲပီး ငှတှေယေူတာ ထိုငျးရဲတှေ ဖမျးဆီးခွငျးခံလိုကျရပွီး. Read more
ပြောကျဆုံးခဲ့တဲ့ မကွယျဇငျမိုး ၆ နှဈသမီးလေးရဲ့အလောငျးကို အဝတျအစားမပါဘဲ ပွနျတှပွေီ့
မိမိ၏သားသမီးမြားကို အထူးဂရုစိုကျကွပါဗြာ….ဆော့ကစားနရေငျး ပြောကျသှားတဲ့ ၆ နှဈသမီးလေး အဝတျအစားမပါဘဲ အလောငျးသာ ပွနျတှေ့ မိမိ၏သားသမီးမြားကို အထူးဂရုစိုကျကွပါဗြာ…ဖောငျးပွငျမွို့နယျ၊ မနျသဲအုပျစု၊ ကုနျးကွီးရှာမှ ဦးထှနျးဝေ + ဒျေါလှသနျးရီ တို့၏သမီး မကွယျဇငျမိုး(၆)နှဈသညျ (18-11-2019)ရကျနေ့ ညနအေခြိနျတှငျ ပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါသညျ။ ဆော့ကစားနရောမှ အိမျပွနျရောကျမလာတာကို ည(၇)နာရီခနျ့ရောကျမှ ပြောကျဆုံးနကွေောငျး သိရှိရတယျလို့ဆိုပါတယျ။ပြောကျဆုံးနသေူ မကွယျဇငျမိုး(၆)နှဈ ရုပျအလောငျး(အဝတျအစား မပါ၊ ပါးစပျကို အဝတျစညျးထား)ကို ယနေ့ (24-11-2019) ရကျနေ့၊ နေ့(၁၁:၀၀) နာရီ အခြိနျခနျ့တှငျ ရှာအနီးကိုငျးတောထဲ၌ တှရှေိ့ကွပါ သညျ။ ကှယျလှနျသူ Read more
ဒေါ်လာ 25000 လစဉ် ဝင်ငွေရမည့် အပြာမင်းသားများ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေ
ဒေါ်လာ 25000 လစဉ် ဝင်ငွေရမည့် အပြာမင်းသားများ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ လိုအပ်နေအပြာ ဇာတ်ကားထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းမှာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ဂျပန်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကတည်းက သရုပ်ဆောင်လိုအပ်ချက် မပြည့်မီလို့ အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရကြောင်း သိရပါတယ် သရုပ်ဆောင်လိုအပ်ချက်မှာ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်တွေ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံ Porn Industry တွေမှာ အမျိုးသားအပြာသရုပ်ဆောင်တွေ ရှားပါးမှုကြောင့် လက်ရှိအချိန်မှာ ဇာတ်ကားအထွက်ကျဲတာတွေ၊ သရုပ်ဆောင်စာရိတ် ကြီးမားတာတွေစတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အမျိုးသားအပြာသရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဟာ တစ်လလျှင် ဒေါ်လာ (၂)သောင်းလောက်အထိ ဝင်ငွေ Read more
ရှမျးပွညျနယျ(မွောကျ ပိုငျး) မိုငျးဆတျခရိုငျ မိုငျးတုံမွို့ နယျရှိအခွခေံပညာကြောငျးမြား တှငျ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပျခကျြ ကွောငျ့ အနိမျ့ဆုံးနဝမတနျး အောငျမွငျထားသူမြားကို နစေ့ား လပေးမူလတနျးပွဆရာ၊ ဆရာမ အဖွဈ ချေါယူခနျ့ထားရနျ ပညာ ရေးဝနျကွီးဌာနက ခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပျသော ကြောငျးတညျရှိရာ ကြေးရှာ၌ နထေိုငျသူမြား၊ ကြေးရှာ အုပျစု ကိုကျညီသူမြား၊ စကျတငျဘာ ၃၀ ရကျတှငျ အသကျ (၃၅) နှဈထကျ မကြျောလှနျသူမြားသညျ နစေ့ား လပေး မူလတနျးပွဆရာ၊ ဆရာမ လြှောကျထားနိုငျပွီး အနိမျ့ဆုံး Read more
စေတီပေါ်မိန်းကလေးတန်မဲ့ ဖိနပ်စီးပြီး POST ပေးတဲ့ ကျောင်းသူနှစ်ဦ
စေတီပေါ် မိန်းကလေးတန်မဲ့ ဖိနပ်ကြီးနဲ့တက်ဖို့ ဘယ်သူတွေ သင်ပေးလိုက်လဲ မသိ ဒီတစ်ခါတော့ မျက်နှာမဖျက်တော့ဘူး မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလေးတွေ ပြောရတာ အကုသိုလ်များလှပါပြီ စာလည်း ကပ်ထားတာပဲ ကျောင်းတက်နေတာပဲ စာမဖတ်တတ်တာတော့ မဖြစ်နိူင်ဘူးရယ် ဘာမှ တရားလာမချနဲ့ အရင်ခေါက်ကတည်းက နောက်တစ်ခါဆိုရင် မျက်နှာမဖျက်ဘဲ တင်မယ်ပြောပြီးသားပ မီးမွှေတယ်ထင်ရင် ဆောင်းတွင်းကြီး အေးတယ် ဝင်လှုံကြပေါ့ 🤔🙂တည်နေရာ ချင်းပြည်နယ် မင်းတပ်မြို့ အနောက်ရပ်ကွက်ရှိ စံမင်းသိရီ စေတီတော်မှာပါ စေတီပေါ် မိန်းကလေးတန်မဲ့ ဖိနပ်ကြီးနဲ့တက်ဖို့ ဘယ်သူတွေ သင်ပေးလိုက်လဲ မသိ ဒီတစ်ခါတော့ Read more
လိပ်ကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ သေဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရေးကူညီပေးဖို့ ဝင်းဇော်ထွန်းနဲ့ ဇော်လင်းတို့ရဲ့မိခင်နှစ်ဦးက နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အသနားခံစာ ပေးပို့ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝင်းဇော်ထွန်းရဲ့မိခင် ဒေါ်မေသိန်းနဲ့ ဇော်လင်းရဲ့မိခင် ဒေါ်ဖြူရွှေနုတို့က အပြစ်မရှိဘဲ သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ သူတို့သားနှစ်ဦး လွတ်မြောက်ရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ မတ်လ ၃ ရက် က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ အသနားခံစာ ပေးပို့ခဲ့တာပါ။ ‘‘ကျွန်မရဲ့သားမှာ အပြစ်မရှိဘူး။ တကယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေ ကိုမဖမ်းဘူး။ အပြစ်မရှိတဲ့ ကျွန်မသားလေးတွေကျ သေဒဏ်ပေး ထားတယ်။ အဲဒါကို ကူညီပေးကြ ပါ။ တကယ်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင် Read more
က်နေ့က ခိုးလမ်းဖြင့်ပြန်လာသော အမျိုးသားတစ်ဦး ဝိုင်းမော်မြို့နယ်၊ ချီဖွေလမ်းရှိ နွမ်မော်ယာန်ကျေးရွာတွင် ချောင်းဆိုးကာ ယနေ့တွင် သေဆုံးသွားသဖြင့် ဒေသခံများက ဝူဟန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကြောင့်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသေဆုံးသူသည် ဇန်နဝါရီလ၂၇ရက်နေ့တွင် တရုတ်ပြည် နယ်စပ်ပန်ဝါဘက်မှ ခိုးလမ်းဖြင့် ဝိုင်းမော် နွမ်မော်ယာန်ကျေးရွာသို့ ပြန်လာခဲ့​ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝိုင်း​မော်မြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် မှ ဦးအားဆီကပြောသည်။ “တရုတ်ပြည်ကနေ မနေ့ညကပဲပြန်လာပြီးတော့ ချောင်းပဲဆိုးပြီးတော့ ဒီနေ့ဆုံးသွားတာ ဝူဟန်ဘက်က ရောဂါလို့ထင်နေကြတယ်”ဟု ဦးအားဆီကပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ် တရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်များတွင် စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေပြီ ကန်ပိုက်တီ နယ်စပ်ဂိတ်တွင် Read more